Miady amin'ny COVID-19 ny filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Miady amin'ny COVID-19 ny filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina
I Afrika dia mijanona ao aorian'i Cuthbert Ncube, ny filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany. Vao tsy ela akory izay ny sefon'ny ATB dia voaporofo fa tsara noho ny COVID-19 ary miady ho sitrana.
Ny filohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina, Andriamatoa Cuthbert Ncube dia miady amin'ny Coronavirus amin'izao fotoana izao.
Ny mpitarika ATB dia voamarina fa nahita fahasalamana herinandro lasa izay tany Pretoria, Afrika Atsimo, fony izy nanao fitsapana ho fanomanana sidina iraisam-pirenena mankany Liberia.
Ny talata maraina Andriamatoa Cuthbert dia namaly ireo mpikambana voakasik'izany tamin'ny fandefasana ny vondrona WhatsApp mpikambana:
Manome hery ahy ny fahafantarana fa fianakaviana lehibe tokoa izahay. Misaotra betsaka noho ny herinao tsara. Mahatonga antsika handeha io.
Ho an'ireo rehetra izay voadona mivantana sy ankolaka tamin'ity virus mahafaty ity dia andao isika handrisika azy ireo hijery ny lafiny mamiratra.
Azoko atao ve ny miangavy ireo namana malalako ny iraka ataontsika hamerenana indray ny kaontinanta afrikanina dia tokony ho antony manentana antsika ary azontsika atao ve ny mampiray antsika hizara io fahitana io? Avelao hanomboka aminao ny dia
Ora vitsy taorian'izay dia nampandre ny ekipany mpanatanteraka izy tamin'ny filazany:
Ry mpiara-miasa malala, mbola any amin'ny quarantine aho ary tsy io no andro tsara indrindra androany. Mandreraka ahy ny tratrako. Azoko angatahina izahay hamerina ny fivorian'ny fivoriantsika amin'ny herinandro ambony dia tokony ho salama tsara aho amin'izay. Ny fialantsiny dia mijanona tsara ary mitazona fiarovana. Miteraka fahasimbana sy faharavana ity Virus ity.
Faouzzou Deme, mpikambana iray avy any Senegal dia nilaza hoe: Homba anao ny vavakay sy ny firariana mba ho sitrana haingana. Re ny hafatrao ary hisy akony tsara ho an'ny mpikambana ao amin'ny ATB. MAHEREZA
Misy ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpikambana ATB an-jatony, sy ireo mpitarika fizahan-tany any Afrika sy ny sisa. Niray hina ny fizahantany Africa raha ny amin'ny ady amin'ny virus sy ny faniriana sitrana haingana Atoa Ncube.
Andriamatoa Ncube dia nantsoina hoe an Maherifo momba ny fizahantany iraisam-pirenena ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Andriamatoa Ncube dia azo alefa amin'ny mailaka ao amin'ny [email voaaro]
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Birao Afrikana momba ny fizahantany, ao anatin'izany ny mpikambana:
Ny fivoahan'ny Norwegian Air avy amin'ny zotra lavitra dia manasongadina lesoka amin'ny maodelin'ny orinasa